SHABAABTA MUJAAHIDIIN MA AHA., By Ex-G/le Sare Omer Suleiman Ali – Araweelo News Network (Archive)
SHABAABTA MUJAAHIDIIN MA AHA., By Ex-G/le Sare Omer Suleiman Ali
Waxaa is weydiin leh in qof kasta oo dadka xasuuqaa uu ciidamadiisa dadka u laaya si ay ugu gaadho, waxay yidhaahdaan waxaan nahay mujaahidiin jannadana kabaha la idiinka saari maayo. Inuu qofkaasi shaydaan yahay waxaa idiin caddaynaya inuu u hadlayo sidii uu hubo oo kale, iyada
oo ruuxna oggaan karin masiirkiisa aakhiro qiyaamaha ka hor. Si uu qofkaasi dhallaanka u adeegsado wuxuu colaad ka abuurtaa dadka wax garadka ah, ama aqoonta leh, isaga oo ka baqanaya in ay arrinka xun ee uu wato beeniyaan.
Waxaa markii ugu horraysay Soomaaliya xoogag daalimiin ah oo dadka xasuuq nooc kasta ah u geysta u adeegsaday dagaal oogayaashii u xuubka siibtay markii danbe Ashahaado la dirirka. Kuwaas oo markaas dambe u adeegayey cadawga Islaamka guud ahaan gaar ahaanna ummadda Soomaaliyeed ee doonayey in ka dib markii ay ku guulaysteen in ay dumiyaan dawladoodii ay dumiyaan qarannimada Soomaaliyeed. Ciidamadaas waxaa loo yiqiin mooryaan wax caqiido diimeed ahna kama muuqan. Waxaana suurto gal ahayd in haddii culumo si wacan wax ugu sheegto in uu is daba qaban karay oo uu xumaanta ka toobad keeni karay meel ay la gaadhaba.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *(البخاري 120).
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(التوبة 80).
Waxaan lee yahay mujaahidnimada Shabaabta kama duwana mujaahidiinta ashaahado la dirirka. Dhallaanka Soomaaliyeedna waxaan uga digayaa in ay ku hodmaan. Waxaa la hubaa in ay maskab adduunyo doon yihiin ee aanay Alle doon ahayn. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
Gudida Doorashooyinka Qaranka Oo Faah-faahin Ka Bixiyay Caqabadaha Horyaal Diyaar-garawga Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka Somaliland